Rue လက်ဖက်ရည်: ဘာအတွက်လဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရ? ဓမ္မတာလာမှုကကူညီသလား။
မုန္လာဥနီကိတ်မုန့် - နည်းနည်းချင်းစီကိုအရသာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေ့လာပါ။
စမုန်နက်လက်ဖက်ရည် - အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပြင်ဆင်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုသိထားပါ
ကျန်းမာခြင်း	 29 ဒီဇင်ဘာလ 2018
Rue tea: ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်၊ ဘယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကပိုပြီးအရသာရှိစေသလဲကြည့်ပါ
Rue သည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်ခုထက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်စေရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်၊ မနာလို ၀ န်တိုခြင်း၊ မကောင်းသောမျက်လုံးနှင့်အခြားမနှစ်မြို့ဖွယ်အခြေအနေများကိုဖယ်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အခါသမယတွင်မဆို Rue လက်ဖက်ရည်ကိုအမြဲကြိုဆိုသည်။
အောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင် rue လက်ဖက်ခြောက်ပြုလုပ်နည်းနှင့်သင်၏လက်ဖက်ထဲသို့ထည့်နိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများအချို့ကိုသင်လေ့လာလိမ့်မည်။ ထွက်ခွာသည်!
rue tea ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဆေးဘက်ဝင်အပင်ဆေးဆိုင်တွင်လတ်ဆတ်သောအရွက်ကို ၀ ယ်ယူခြင်းဖြစ်သော်လည်းသင်ပိတ်မိပါကအခြောက်ကိုဝယ်ပါ။ ထိုစက်မှုအိုးများသည်ဤမျှထိရောက်မှုမရှိနိုင်ပေ။
လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်အခြောက်ခံထားသော rue တစ်အုပ်ကို ယူ၍ ရေနွေးတစ်လီတာထဲသို့လောင်းပါ။ အပူကိုပိတ်ပါ၊ ဒယ်အိုးကိုရေနှင့်ဆေးပါ၊ အဖုံးအုပ်ပြီးမိနစ် ၃၀ ထားပါ။ လက်ဖက်ကိုစစ်ထုတ်ပြီးအချိုမပါဘဲတစ်နေ့ ၃ ခွက်မှ ၄ ခွက်သောက်ပါ။
Rue လက်ဖက်သည်အရသာရှိပြီးအအေးခံထားသောကြောင့်အလွန်အရသာရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်သက်သက်မဟုတ်ပဲဒီလက်ဖက်ရည်ကိုသောက်ချင်လည်းသောက်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်အလွန်ကောင်းသောပေါင်းစပ်မှုသည်cachaçaနှင့် rue လက်ဖက်ရည်ဖြစ်သည်။
Cachaçaသည်ဘရာဇီးနိုင်ငံ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမှန်ကန်သောပမာဏနှင့်ပမာဏအနည်းငယ်ယူလျှင်၎င်းသည်သင့်အားပျော်ရွှင်စေမည်ဖြစ်ပြီးမည်သည့်ထိခိုက်မှုကိုမျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသည်းအတွက်cachaçaပြဿနာသည်ချဲ့ကားခြင်း ဖြစ်၍ မည်သို့ပင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
ဒါကြောင့်cachaçaတစ်ခွက်ကိုမင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှာထည့်လိုက်တာကမင်းအတွက်အရသာရှိတယ်၊ ခဏလောက်ပျော်ဖို့၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ ကွတ်ကီးတစ်ခုခုစားတာဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလုပ်ချင်တာကမင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုဘဲ။
သစ်ကြံပိုးခေါက်နဲ့ Rue လက်ဖက်ကဘာအတွက်ကောင်းလဲ။
မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကကျန်းမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ rue လက်ဖက်ရည်ကိုတကယ်သောက်ဖို့ဆိုရင်၊ မင်းစိတ်ကူးကနည်းနည်းထည့်ဖို့ဘဲ သစ်ကြမ်းပိုး လက်ဖက်ရည်။ ၎င်းကိုအလွန်အကျွံမလုပ်ပါနှင့်၊ ခွက်တစ်ခွက်လျှင်တစ်ခွက်သာပေးပါ။ သစ်ကြံပိုးခေါက်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် antioxidant ပါ ၀ င်တာကြောင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
လတ်ဆတ်သော rue ကို ၀ ယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်စိုက်ရန်အပင်ပျိုးထားသော rue ပျိုးပင်ရှိသည့်အပင်ထွက်ဆေးဆိုင်များကိုရှာဖွေပါ၊ ထို့နောက်အရွက်များကိုရိတ်သိမ်းပါ။
သင်ရှာမတွေ့ပါကသဘာဝအစားအစာစတိုးဆိုင်များတွင်လက်ဖက်ခြောက်သုံးအိတ် (သို့) အိုး၌ရောင်းချသောအခြောက်ခြောက်ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖက်ခြောက်ထုပ်ကိုဘယ်တော့မှမဝယ်ပါနှင့်။ ၎င်းသည်လုံး ၀ စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်နေသောကြောင့်သင် ၀ ယ်ယူသောရနံ့ (သို့) အခြားမည်သည့်ဆေးပင်မဆိုတန်ဖိုးကိုဆုံးရှုံးစေသည်။
Rue သည်အမျိုးသမီး၏ဓမ္မတာလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကူညီသောဆေးပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ရည်ကအဲဒါကိုလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး ရာသီလာခြင်း ကျဆင်းသွားသော်လည်း၎င်းသည်အရည်ကို ပိုမို၍ အရည်ပျော်စေသည်။ ထို့အပြင်ကြွက်တက်ခြင်းနှင့် PMS ၏အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုကာကွယ်ရန်လည်းအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Rue လက်ဖက်ရည်သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဆီး၊ မီးယပ်၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်အစာခြေစနစ်များကိုတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သည်၊ ၎င်းကိုအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အပြင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
rue ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းကျိုးတစ်ခုမှာ၎င်းသည် diuretic ပါ ၀ င်သည်၊ ၎င်းသည်ဆီးမှတဆင့်အရည်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဤအရည်ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်လူတစ် ဦး အားသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်၊ ဆားနှင့်အဆီအားလုံးကိုဆီးမှတဆင့်ဖယ်ရှားပေးပြီး၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါးလွှာသည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်လိုအပ်သူအများစုသည်ဆား၊ သကြား၊ အဆီအားလုံးကိုဆီးမှတဆင့်ဆုံးရှုံးရန်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့နေ့စဉ်ရေများများသောက်ပါ၊ ဆိုဒီယမ်နဲ့ဂလူးကို့စ်အများကြီးပါတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ပြီးနေ့စဉ်လက်ဖက်ရည်သောက်ပါ။
မီးယပ်လက်ဖက်ရည်တွင်အမျိုးသမီးများအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများအပြင်ဆီး၌ဆိုဒီယမ်နှင့်သကြားဓာတ်ကိုချေဖျက်ရန်အတွက် rue လက်ဖက်ရည်တွင်ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းကိုကူညီပေးသည်၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်ကောင်းမွန်သည်၊ အဆစ်ရောင်နာများအတွက်သက်သာပျောက်ကင်းစေသည့်ဆေးလည်းဖြစ်သည်။ သင့်တော်သောအစာခြေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်စေခြင်း
သင် Rue လက်ဖက်ရည်နှင့်ပတ်သက်သောဤစာသားကိုကြိုက်လျှင်သင်၏လူမှုကွန်ယက်များနှင့်စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များပေါ်တွင်ဝေမျှပါ။
Goji Vita - ကိုယ်အလေးချိန်တက်ချင်သူတွေအတွက်
လက်ဖက်ရည်ကြမ်း - အဘယ်လက်ဖက်ရည်ကသင့်ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သနည်း။ ဒီမှာရှာပါ။
အိမ်၌ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်လေ့ကျင့်ခန်းများ - ယနေ့သင်စတင်လေ့ကျင့်ရန်သင့်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကြံပြုချက်များ!
အင်္ဂလိပ်ရေ ဘယ်လိုယူမလဲ ဒါကတကယ်ကိုကိုယ်ဝန်ရဖို့ကူညီသလား။ [တွေ့ဆုံရန်]